मृतक प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको आयो नसोचेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, थाहा पाउँदा प्रहरी नै बन्यो चकित ! – Sandes Post
मृतक प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको आयो नसोचेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, थाहा पाउँदा प्रहरी नै बन्यो चकित !
April 12, 2022 2345
मोरङको लेटाङ घटनामा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको गोली लागेर मृत्यु भएको खुलेको छ । चैत ६ गते एक शिक्षकले विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार गरेको घटनापछि हिंसा भड्कँदा भएको झडपमा २६ वर्षीय श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला उनको धारिलो हतियार प्रहारबाट मृत्यु भएको बताइएको थियो ।
तर, पोस्टमार्टम रिर्पोटमा उनको गोली लागेर मृत्यु भएको खुलेको हो । श्रेष्ठको कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा ‘सक प्रिजेन्ट बाई फाइयर आम इन्जुरी’ भन्ने उल्लेख छ । प्रहरीले गरेको लामो अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वनि श्रेष्ठको शरीरबाट गोली निकालिएको उल्लेख छ ।
श्रेष्ठमाथि लागेको गोली नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा त्यो प्रहरीको हतियारबाट निस्केको गोलीसँग नमिलेको जनाइएको छ ।
घटना भएको दिन प्रहरीको तीनवटा हतियारबाट फायर खुलेको भए पनि श्रेष्ठको शरीरमा भएको गोली प्रहरीको हतियारबाट चलेको पुष्टि हुन नसकेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए ।
प्रदर्शनकारीबाटै प्रहरीमाथि गोली चलाइएको देखिन आएको प्रहरी अनुन्धानबाट खुलेको छ । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म ६३ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये १६ जना बालबालिका छन् । १५ जना बालकलाई अभद्र व्यवहार, उमेर पुगेका सवालक १४ जनालाई कर्तव्य ज्यान, ३२ जनालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
Prevघरबेटी भेट्न जाँदा पलले फेरी भने चिन्ता नलिनुस दाई म निर्दोष छु (भिडियो हेर्नुस्)
Nextनेपाली निर्माताको नाताले ‘ए मेरो हजुर-४’ हेर्छु – दिपक राज गिरि
आज शनिबार, चम्किँदैछ यी ६ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल